Hanti dhowrka Guud ee Qaranka oo sheegay in baaris lagu sameeyay Xafiisyada Madaxda dowladda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dr. Nuur Faarax oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa wareysi uu siiyay laanta afka Soomaaliya ee BBC-da ayaa sheegay in sanadkan uu yahay sanadkii isla xisaabtanka, isla markaana Hey’ad walba ay baaris marsiinayaan.
“Sanadkan waa sanadkii isla xisaabtanka, cidii lagu helo musuq maasuq waa la qabanayaa, waa la xirayaa, hey’adaha amniga ayaa loogu yeerayaa, Maxkamad ayaana la soo taagayaa”ayuu yiri Hanti dhowrka Guud.
Sidoo kale waxaa uu sheegay inay baaritaan guud ku sameeyeen Xafiisyada Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka, isagoo xusay in baaritaanada ay sameeyaan uu yahay mid madax banaan.
“Baarista cid ka madax banaan ma jirto, hadana waxaa dhowaan baarnay Xafiiska Madaxweynaha, kan Ra’iisul Wasaaraha, Xafiiska Gudoomiyaha Baarlamaanka, sanadkan 2015 isla xisaabtan dhab ayaa dhacaya, cidii lagu helo musuq maasuq iyo xisaab is daba marin sharciga ayaa la horkeenayaa”ayuu yiri Dr. Nuur Faarax.
Mar la weydiiyay in baaritaanada xaga musuq maasuqa iyo shaqsiyaadka lagu eedeeyo inuu yahay mid dad gaar ah ku siman yahay ama kuwa laga tirada badan yahay ayuu waxba kama jiraan ku tilmaamay, isagoo xusay in sharciga loo wada siman yahay, dhamaan hey’adaha dowladda iyo 25-ka wasaaradood la baaray.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowaan meel mariyay sharciga Hanti dhowrka Guud ee Qaranka, iyadoo sharcigan uu ka qeyb qaadan doono daba galka musuq maasuqa lagu sameeyo hantida dowladda iyo cid kasta oo lagu helo is daba marin in maxkamad la soo taago.
Soomaaliya ayaa kaalinta ugu hooseysa ka gashay dalalka ugu musuq maasuqa badan caalamka, waxaana lagu eedeeyaa in Hey’adaha dowladda uu ka jiro musuq maasuq aad u baahsan.